Aqalka Senate -ka Mareykanka ayaa ku boorriyay inay qabtaan dhageysi ku saabsan adeegsiga shirkadaha diyaaradaha ee lacagaha badbaadinta COVID
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Aqalka Senate -ka Mareykanka ayaa ku boorriyay inay qabtaan dhageysi ku saabsan adeegsiga shirkadaha diyaaradaha ee lacagaha badbaadinta COVID
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Shirkadaha diyaaradaha ee Mareykanka ayaa helay in ka badan $ 79 bilyan oo lacag badbaadin ah dhammaan saddexda biil ee la xiriira COVID sannadka 2020-2021 si ay u caawiyaan iyaga, shaqaalahooda, iyo warshadaha safarka hawada si ay uga badbaadaan masiibada COVID ee ugu daran.
FlyersRights waxay ku baaqaysaa dhegaysiga kormeerka agaasimayaasha guud ee diyaaradda, shaqaalaha iyo wakiilada rakaabka.
Shirkadaha diyaaradaha waxaa la siiyay kaabisyo federaal ah oo aad u badan ilaa 2020.
Waxaa jira su’aalo ah in lacagta cashuur bixiyayaasha ay si khaldan u adeegsadeen shirkadaha diyaaradaha.
Madaxweynaha FlyersRights Paul Hudson ayaa ku baaqay in Guddiga Ganacsiga Senate -ka ee Senate -ka ay kormeeraan dhegeysiyada agaasimayaasha diyaaradaha iyo wakiillada shaqaalaha iyo rakaabka.
FlyersRights Madaxweynaha xaqa ah Paul Hudson
Paul Hudson wuxuu sharraxay, “Diyaaradaha waxaa la siiyay kabitaanno federaal ah oo aad u ballaaran tan iyo 2020 si ay u sii ahaato adeegga hawada dadweynaha mid xooggan loona yareeyo caabuqa COVID. Laakiin baajinta ugu sarreysa ee ugu dambeysay, dib-u-dhaca duulimaadka, oo lagu daray diidmada diyaaradda ee qaar ka mid ah tilmaamaha CDC ayaa su’aal gelineysa in lacagta canshuur-bixiyeyaasha ay si khaldan u adeegsadeen maamulka diyaaradda.
Shirkadaha diyaaradaha ee Mareykanka ayaa helay in ka badan $ 79 bilyan oo lacag badbaadin ah dhammaan saddexda biil ee la xiriira COVID sannadka 2020-2021 si ay u caawiyaan iyaga, shaqaalahooda, iyo warshadaha safarka hawada si ay uga badbaadaan masiibada COVID ee ugu daran. Koongarasku wuxuu ugu tala galay lacagtaan inay u tagaan duuliyeyaasha, kalkaaliyayaasha duulimaadka, iyo shaqaalaha kale ee diyaaradda iyo shaqaalaha madaarka si loo hubiyo in la siiyay lacag intii lagu jiray xilliga dalabka aadka u niyadjabsanaa iyo in la hubiyo in shirkadaha duullimaadyadu ay yeelan doonaan awood ay ku daboolaan baahida safarka ee kordhay isla marka COVID -19 xaaladdu way hagaagtay
Diyaaradaha, gaar ahaan American Airlines, Spirit Airlines, iyo Southwest Airlines, ayaa gabi ahaanba fashiliyay dadka Maraykanka. Xagaaga oo dhan, shirkadaha diyaaraduhu waxay baajiyeen boqollaal duulimaad maalin kasta sababtoo ah ma aysan haysan shaqaale ku filan oo diyaar u ah inay tagaan. Maalintii ugu xumayd, Ruuxa Airlines baajisay in ka badan kala bar duulimaadyadeedii la qorsheeyay.
Tani waa wax aan la aqbali karin, oo Senator Maria Cantwell, oo ah Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga ee Guurtida, ayaa warqad arrintan ku saabsan u dirtay shirkadaha diyaaradaha bishii Luulyo. FlyersRights.org waxay la kulantay shaqaalaheeda si ay ugala hadasho arrinta iyo inay u soo jeediso xalka xadgudubyadii ugu dambeeyay ee diyaaradaha.
FlyersRights.org Dhageysiga kormeerka guddiga ee la soo jeediyay si loogu qasbo Doug Parker, Gary Kelly, Ted Christie iyo agaasimayaasha kale ee diyaaradda inay sharxaan waxay ku sameeyeen lacagta gargaarka COVID iyo sababta ay diyaaradahoodu ugu guuldareysteen inay keenaan waxa sharcigu damacsan yahay.
Dhageysiga kormeerka waa in sidoo kale ay ku jiraan wakiilada rakaabka iyo wakiillada shaqaalaha. FlyersRights.org waxay soo jeedisay a kicinta iyo qorshaha fogeynta bulshada taasi waxay ka dhigi lahayd shirkadaha duullimaadka faa iido, iyagoo ku shaqeynaya awood sare inta lagu jiro aafada, waxayna hubin lahayd in safarka hawada uu ka badbaado badan yahay, dhammaantoodna ka qiimo jaban yihiin baakadaha samatabbixinta.